Michael Gross paRwendo rweBurt Gummer & 'Kudengenyeka: Zuva Rinotonhora muGehena' - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Michael Gross paRwendo rweBurt Gummer & 'Kudengenyeka: Zuva Rinotonhora muGehena'
Michael Gross paRwendo rweBurt Gummer & 'Kudengenyeka: Zuva Rinotonhora muGehena'
yakanyorwa na Waylon Jordan April 27, 2018
Kana iwe ukabvunza Michael Gross, anokuudza kuti ndiye murume ane rombe kupfuura vese mupenyu. Haana kungo ridza chete mumwe wevababa vekupedzisira veTV pa hit sitcom "Mhuri Tie", asi pakapera show, akaisa chinzvimbo cheupenyu hwese saBurt Gummer, muponesi anotora pfuti mune zvinotyisa zvinotyisa. -comedy franchise Kutuka.
Gross, uyo parizvino ari mukutarisa mune yechitanhatu yekupinda franchise Kudengenyeka: Zuva Rinotonhora muGehena, nguva pfupi yadarika akagara pasi neHorror kuti titaure nezverwendo rwake runoshamisa uye kuti zvakatanga sei nekugadzira nhoroondo yeterevhizheni.
"Iwe unotora zvinhu izvi sehusina basa paunozviita, uye hauzive zvazvinoreva kuvanhu paunenge uchizviita," akadaro mutambi. “Asi patakatanga kuita maTie Family paParamende mu1982, padhuze padhuze pedu paive ne'Taxi 'yakatora mifananidzo ipapo. 'Laverne & Shirley' uye 'Mazuva Anofara' vachiri kutamba, 'Joanie Loves Chachi' aive mune imwe studio iri pedyo. "
Iyo showa yakaenzana vaoni vanosvika mamirioni makumi maviri nemasere pasvondo, uye payakasvika kumagumo muna 28, Gross akashamisika apo pakavhurika musuwo webasa
“Wokutanga Kutuka yaindifadza chaizvo nekuti zvakaitika kunze kwegedhi mushure me'Family Ties 'uye yakapindura mibvunzo miviri, ”akadaro. “Kwaizove nehupenyu here mushure me'Mhuri Tie '? Vanhu vangandigamuchira semunhu akatosiyana neunhu here? ”
Zvakadaro, mushure mekunakidzwa nebasa muhupenyu theatre uchitamba akawanda mabasa pagore, Gross haana kana dambudziko chairo kuita shanduko. Muchokwadi, anga achinyanya kuda kuzviita, uye akafara kuratidza vashoropodzi kuti vakanganisa.
“Kutaura chokwadi newe kuti shanduko yanga isina kuoma. Yakanga yakanyorwa zvakanaka uye ndainzwa kuti ndaiziva murume uyu kubva pakutanga, ”Gross akatsanangura. “Ini zvimwe ndainzwa kusagadzikana kutamba Steven Keaton aive akajairika. Ndinofarira kutamba vanhu vanopenga, ndipo panyanya vanhu vasina hunhu. ”
Michael Gross naReba McEntire mune yekutanga Kudengenyeka
Kuna Gross, zvisinei, kutamba Burt kwakazosvika pakufamba mutsetse mutete, uye akapedza nguva yakawanda achifunga kuti riini kana sei "murume anopenga ane pfuti zhinji" anosetsa, uye anova riini chinhu chine njodzi? Uyu kunyanya wakave mubvunzo wakanangana muchiedza chenhamba inowedzera yekupfura kwevanhu vakawanda.
“Ndicho chikonzero nei isu pakupedzisira takasimbirira pamutemo wakakosha we Kutuka, ”Akadaro mutambi. “Hapana munhu anotendekera mumwe munhu pfuti mumafirimu edu. Vanhu ndivo vakanaka vakomana uye zvikara ndivo vakaipa vakomana. Tose tiri mhuri yevanhu tiri kurwa nemuvengi chaiye. ”
Yakanga ichingova chimwe chezvinhu zvakauya pamwechete izvo zvinoita kuti kodzero ibudirire, uye zvakadaro, mushure mefirimu yekutanga, zvaiita sekunge yafa isati yatanga.
Vagadziri vanga vasinganyatso kuziva kushambadzira kwekutanga Kutuka payakaburitswa mumitambo. Vakavimbisa vateereri hardcore rinotyisa bhaisikopo uye vakatadza kuendesa. Mushure memavhiki maviri chete mumitambo, iyo firimu yakadhonzwa ndokutumirwa kuvhidhiyo.
Uye ipapo chimwe chinhu chemashiripiti chakaitika.
Iwo ekutanga makumi mapfumbamwe aive mazuva ekubwinya ezvitoro zvekuhodha vhidhiyo, uye Kutuka nhamba dzekurenda dzakatanga kukura zvakanyanya. Yakanga iri mhando yechitendero chinotevera icho pasina kana munhu aimbotarisira uye hapana kana mumwe akashamisika kupfuura Gross paakashevedzwa kuti aone kana angave achifarira kuita sequel.
"Vanhu vakandisheedza makore ese akazotevera ndokuti, 'Unotenda here kuti tichagadzira imwe?' uye ndati handina kuvaudza zvachose kwete, ”Gross akaseka. “Asi sezviri pachena, yakange yapfuudzwa kunge chakavanzika chemunhu chine tsvina. Yakanga yabata, uye vanhu vaida yakawanda. ”
"Zvimwe" zvakashandurwa muchikamu cheGross kutora yakawanda nzvimbo yepakati mune yakazara arc franchise. Yakapa Gross mukana wekuti anyatso kuchera kuti Burt Gummer aive ani uye chii chakamuendesa kuita sarudzo dzaakaita.
“Patakapinda Kudengenyeka 5, Ndakavaudza kuti taida mamwe matambudziko kuBurt. Tinoziva kuti anogona kuvhima zvikara. Asi tingamudenha sei? ” Gross akadaro. "Saka takaunza mwanakomana wake tikamubvunza kuti, 'Munhu akasurukirwa anotarisana sei nenyaya yekuti kune mumwe munhu anoda kuve chikamu chehupenyu hwake?'"
Zvaive, sezvazvakazoitika, dambudziko rinonakidza uye rinonakidza iro Burt ainyanya kukwira uye pakupedzisira iye nemwanakomana wake vakauya ku… zvakanaka, ngatizvitumidzei rugare.
Jamie Kennedy naMichael Gross mune Kudengenyeka
Nemufirimu uchangoburwa, Burt nemwanakomana wake, Travis (akaridzwa naJamie Kennedy), vari kuvhima maGraboids pamwechete, panguva ino kumatunhu ekuchamhembe kweCanada uko Burt anopedzisira atarisana nedambudziko rake guru, zvakadaro: kufa kwake.
"Ko murume anodzora ndicho chinhu chakanyanya kukosha muhupenyu hwake anorega sei kutonga ikoko?" mutambi akabvunza. "Chinhu chakaomesesa muhupenyu hwake kutadza kutungamira muhondo."
Kudengenyeka: Zuva Rinotonhora muGehena, iyo icharova DVD neBlu Ray musi waMay 1, zvinoratidza kuti iyi franchise haina kurasikirwa chero nekurumwa kwayo. Saizvozvo, Kutuka inogona kunge iri franchise inoenderana kwazvo yerudzi rwayo. Ivo havasati varega vateveri vavo pasi, uye sekutaura kwakaita Gross kumagumo ebvunzurudzo yedu, avo mafeni vanozopedzisira vasarudza ramangwana reiyi yakayedzwa uye yechokwadi nhevedzano yezvisikwa maficha.
"Haumbofa wakaziva zvichaitika," akatsanangura kudaro. “Ini ndaigara ndichibheja ndichipesana neHollywood. Ratidza bhizinesi chikamu che5% uye 95% bhizinesi asi kana vatanhatu vachiita zvakanaka, ndinofunga tine mukana wekudzoka. ”
Tarisa uone trailer ye Kudengenyeka: Zuva Rinotonhora muGehena pazasi uye wozvitsvaga paDVD, Blu Ray uye VOD muna Chivabvu 1, 2018!
InterviewsMichael GrossKutukakudengenyeka: zuva rinotonhora mugehenaUniversal PicturesWaylon Jordan
'Hereditary' Trailer Inokonzera Chaos Pakuratidzira 'Peter Rabbit'
Stephen King's 'Iyo Yakareba Kufamba' Inofamba kuenda kuNew Line Cinema